Fitaterana: Mikaonan-doha ny mpitatitra matihanina amin'ny zotra nasionaly eto Antsirabe
samedi, 10 novembre 2018 11:28
Sary Gaypatriote Antsirabe
Tao amin’ny Centre Diantana Antsirabe no nanaterahan'izy ireo izany ny zoma 9 novambra 2018. Fikaonan-doha no natao, ka lohahevitra roa no nodinihina, dia ny lafiny tsy fandriampahalemana eny amin’ny lalam-pirenena sy ny fampakarana ny sarandalana miainga avy eo Antsirabe makany amin’ny faritra hafa.
Raha ny fanazavana nomen’Atoa Razafimisata Tanteliharivola, filohan’ny Fikambanan’ny mpitatitra dia efa misy ny fiaraha-miasa amin’izy ireo sy ny mpitandro filaminana saingy ny fanantsarana izany no tadiavina.
Ankoatra izay dia mikasa hampiakatra ny sarandalana ihany koa izy ireo, satria efa 12 taona lasa no nametrahana io sarandalana miainga eto Antsirabe makany amin’ny faritra io, ka efa nilaozan’ny vanim-potoana.
Heverin’izy ireo araka izany fa hasondrotra ho 10 Ariary isaky ny kilaometatra izany ankehitriny, izay hihatra afaka 15 andro eo ho eo.
Tsy voakasik'ity fampakarana sarandalana ity ny zotra rezionaly raha ny fanazavana ihany.